जेलबाट छुटेका ओलीले गिरिजाप्रसादलाई भेट्दा हरदम सोकेसमा आँखा दौडाएपछि धेरै असहज भयो - Media Dabali
शेरबहादुर देउवासँग टक्कर परेपछि बिमलेन्द्र निधिले गरे बीपी र गणेशमान पुत्रसँग परामर्श
जेलबाट छुटेका ओलीले गिरिजाप्रसादलाई भेट्दा हरदम सोकेसमा आँखा दौडाएपछि धेरै असहज भयो
शुक्रवार, माघ १६ २०७७
टंक कार्की, पूर्वराजदूत
जेलबाट छुटेपछि एकदिन केपी ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइराला भेट्ने इच्छा जाहेर गरे । मैले भेटको चाँजोपाँजो मिलाएँ । उm बेला गिरिजाबाबु चावहिल, मित्रपार्कमा बस्थे ।
समयमै हामी उनको निवासमा पुग्यौं । भुइँतलाको बैठक कक्षमा एकछिन हामीले कुर्नुपर्यो । अलिक एकछिनमा गिरिजाबाबु चिटिच्याट्ट परेर, दौरासुरुवाल, कालोटोपी र टल्कने कालै जुत्तामा बैठक कक्षमा उपस्थित भए ।
उनको तुलनामा हामी अलिक ल्याङ्गफ़्याङ्गे थियौं । ओलीजी दुब्लो पातलो, शर्ट र खुझ्मुझिएको पैन्ट, उसमाथि पेटी नलगाको, फ़्याटफ़्याटे स्यान्डलमा । म कुन चाहिँ गतिलो थें र ? सायद अरुले उतिखेर हाम्रो लवाईखुवाईबारे कम्युनिष्ट यस्तै हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्थे क्यारे ।
हामीले शिष्टाचारमा नमस्कार साटासाट गर्यौं । गिरिजाबाबु टेवलको उसपार भित्तापट्टि कुर्सीमा, हामी टेबलको बगलमा रहेको कुर्सीमा । उसदिनको वार्ताको विषयवस्तु उस्तो चासोको कुरा भएन ।
ओलीजीको प्रस्तुतिको हाउभाउ (बडी ल्याङ्गवेज) ले भने मलाई कम असहज महसुस भएन । गिरिजाबाबु जिज्ञासु र एकाग्र देखिन्थे । यता, ओलीजी झट्ट हेर्दा उनलाई वेवास्ता गरे (मिनिमाइज) जस्तो, उनका आँखा भित्तामा सजाईएका शोकेसको वस्तुमा घरि यता घरि उता टोल्याइरहेका, अनि बीचबीचमा फ्याट्टफ्याट्ट जवाफ दिने । बीचबीचमा म रफ्फु भर्थें ।
सायद गिरिजाले उति राम्रो नमानेका पनि हुन सक्छन् । हुन त यो एजेण्डामा भेटभन्दा पनि शिष्टाचार भेट मात्रै थियो । तैपनि, हामी त्यहाँबाट बिदावारी भयौं । मलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन ।
बाहिर निस्कना साथै मैले ओलीजीलाई कसिहालें, ‘होइन आज तपाईले के गर्नु भाको ? वार्ता त आमनेसामने हेराहेर गरेर पो हुन्छ त, वास्तै नगरे जस्तो, वरपर चारतिर आँखा डुलार पनि वार्ता हुन्छ त ? गिरिजाबाबुले के फिल गरे होलान् ?’ उनले बडो मार्मिक जवाफ दिए, ‘शोकेशमा दौडिएका आफ्ना नजरलाई सम्झिदै ।
जेलमा लामो समयसम्म बस्नेको एउटा समस्या हुँदो रैछ, हामीले त त्यस्ता नयाँनयाँ चीज देखेकै हुन्न नि, आँखा त त्यता गइहाल्दा रछन् ।’ म झसङ्ग भएँ र चित्त बुझाएँ । आफ्नै धुन, आफ्नै संसार ।